လေယာဉ်ပျံ၊ ဒါမှမဟုတ် ကဗျာရွတ်ပြနေသလို သူ့ဘာသာစကားပြောပုံ (မြင့်သန်း) | လမ်းအိုလေး
July 12, 2014 by lanolay	Leaveacomment
မူရာကာမိ၏ နာမည်ကြီး ‘လေယာဉ်ပျံ’ ဝတ္ထု ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လို Aeroplane: or, how he talked to himself as if reciting poetry ဟု ဘာသာပြန်သည်။ ဝတ္ထုဆိုသည်မှာ ဝတ္ထုလောကကြီး အထဲက အရေးအသားများ ဆိုသည့် သဘောကိုဖော်သော ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ဝတ္ထုကို ဝတ္ထုဖတ်ခြင်းဖြင့် ဖတ်ရသည်ဟူသော အဆိုကို ထောက်ခံသော ဝတ္ထုမျိုး။ မူရာကာမိ၏ ဝတ္ထုလောကကြီးထဲသို့ ရောက်ရှိရန် သွားတတ်ဖို့ လိုသည်။ စင်စစ် သွားတတ်ရန်မှာ ဖတ်သူတို့ဘက်မှ အားထုတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
(Airplane by Haruki Murakami. Eng trans: Jay Rubin.
ကြိုဆိုပါတယ် မေယာလန်းစကီး၊ စိန့်လပ်ကီးနေ့ (စိုင်းဝင်းမြင့်)
ကမ္ဘာ﻿မြေကြီး - ၁၈ (ဧဧသန်း)